အကြံပြုစာ – Page3– ECD
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းနှင့် အကျိုးတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် POSCO International Corporation သည် ရခိုင်ကမ်းလွန်ရှိ Block A-1 တွင် လက်ရှိ လည်ပတ်ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည် ရွှေသဘာဝဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်ရေး စီမံကိန...
Green Finance Sector Consultant position announcement
This position is open for Myanmar National asaGCF Green Finance Sector Consultant. This consultancy will support this process of DAE nomination from within Myanmar. Under the...
Announcement for the position of GCF Green Finance Sector Consultant
This position is open for Myanmar National asaGCF Green Finance Sector Consultant. This consultancy will support this process of DAE nomination from within Myanmar. Under the overall guidance...
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး ဝန်ထမ်းမိသားစုများ၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မိ...